Iindaba zika 11:00, nge 3 eyoMga 2018 – Zibonele FM | 98.2
Iindaba zika 11:00, nge 3 eyoMga 2018
De Lille uxhasa amalungelo amanina
Inkokheli yombutho omtsha i Good Movement nowaziswe izolo erhawutini unkosikazi Patricia de Lille uthi, uyayixhasa inkqubo kamakulinganwe kwezoqoqosho i BBBEE noxa engaxolanga yindlela eyenziwa ngayo. Ukwathe eyonanto imgqibayo kukubona amanina ingawona athwaxwa yindlala. lenkokheli ikuthethe oku ngethuba ebambe inkomfa nonondaba
MetroRail nokulwa uphulo mthetho kuLoliwe
Icandelo lezonyanzeliso mthetho kwimizila kaloliwe lithi libambe abantu abalithoba ukususela lathi lamiliselwa ngenyanga ka October. Elicandelo yinkazathi phakathi kwesixeko sasekapa, urhulumente wephondo kunye ne arhente yokuthutha abantu kumzila kaloliwe i Prasa ngamafuphi. Injongo yalo kukuphelisa nya ulwaphulo mthetho kololiwe, ukunqanda ukonakaliswa kweziseko zenkonzo kaloliwe kuquka nokutshiswa okucetyiweyo kwezixhobo zakwa metro rail. Kulonyaka wodwa sele konakaliswe amakhareji asondeleyo kumashumi amahlanu kumzila wesixeko. Ngenzame zokuphelisa oku kwaye kwakhutshwa amagosa alikhulu nathe anikwa uqeqesho olumandla ukujongana nemizila kaloliwe. Othethela inkampani yakwa Metrorail u Riana Scott uthi phakathi kwezinto ababanjelwe zona abrhanelwa kukufunyanwa bephethe izxhobo ezingekho mthethweni.
Eskom useza wuqhawuqhawula umbane
Abemi beli lomzantsi afrika bayalunyukiswa kwakhona ukuba namhlanje
bangalindela ukuhlala ebumnyameni kwakhona nanjegoko inkampani
ephehl’amandl’ombane uEskom edize ukuba kusaqhutyekekjwa ngesigama
sesibini sokuqhawuqhawulwa kombane namhlanje. Lenkampani ihambise
ngelithi okukuqhawulwa kombane kubangelwa kukunqongophala kwedizili,
ukwehla kwezinga lamanzi kwakunye nokusilela kokulungiswa kwezinto,
ukanti okukuqhawulwa kombane kulindeleke ukuba kuyaqhuba phakathi
kwentsimbi yesithoba kusasanje kwakunye neyeshumi ngokuhlwa. Usomlomo
wakwaEskom uKhulu Pasiwe uvakalise ukuba singaphezu kweshumi elinanye
leebhiliyoni zeerandi isixamali esibekelwe bucala ukuze sijongane
nemiba yokulungisa izinto kulankampani ekwavuma ke kambe nokuba enye
yezinto ezisisizekabani zeengxaki zalankampani kukusilela kwendlela
UStella Ndabeni ubekwe endaweni yakhe ngumbutho wakhe iDA
Umbutho weDemocratic Alliance uvakalise ukuba osandul’ukubekwa
esihlalweni sokubangumphathiswa wonxibelelwano uStella
Ndabeni-Abrahams akanawo amagunya okunik’imiqathango ibhodi elawulayo yejelo losasazo iSABC. Oku kuza emva kokuba elinye lamaphepha ndaba izolo lidize ukuba umphathiswa ungxolise kanobo ibhodi yakwa SABC malunga nesicwangciso sayo sokudenda abasebenzi. Ngokwengxelo umphathiswa ugrogrise lebhodi ngokuyikila kumongameli welizwe kunye nepalamente. Lombutho uhambise ngelithi ukuzikhwebula nokuzinxwema kwalokaNdabeni-Abrahams kwiinkqubo zalabhodi kuba izalele
endle ngokuthobela imiyalelo yakhe malunga nokudendwa kwabasebenzi
kukunyhasha nje amalungelo elajelo nendebelefele nje elinyibela
ukuzimela kwelajelo losasazo. Nangona kunjalo iSABC inikezwe de
kubeyinyaka yomqungu ukuba ingenise ingxelo yophicotho zincwadi
malunga nemivuzo yabasebenzi kwakunye nendlela elizimisele ukusebenza
ngayo ukubheka phambili kwakunye nomkhombandlela. Ogaqel’isikhundla
sokubangumphathiswa ukuba iDA ingazuz’ulawulo uPhumzile van Damme
uhambise ngelithi igugu lingabalikhulu umbombo uyaqhosha nanjengoko
etyhole uNdabeni Abrahams ngokuhambela phezulu ezama ukunikela
imiqathango ef’amnqe kulabhodi nantoleyo ingabekelwanga msebenzi
Kubanjwe abantu kumzila kaLoliwe
I-arhente yonyanzeliso mthetho kwimizila kaloliwe lithi libambe abantu abalithoba kususela lathi lamiliselwa ngenyanga yedwarha nanyakanje. Elicandelo lubambiswano ngaxhathalinye phakathi kwesixeko sasekapa, urhulumente wephondo kunye ne arhente yokuthutha abantu kumzila kaloliwe i Prasa ngamafutshane. Injongo yalo kukuphelisa nya kusiphule neengcambu ulwaphulo mthetho kololiwe, ukunqanda ukonakaliswa kweziseko zenkonzo kaloliwe ndawonye nokutshiswa okucetyiweyo kwezixhobo zakwa metro rail. Kulonyaka wodwa sele konakaliswe amakhareji asondeleyo kumashumi amahlanu kumzila wesixeko. Ngenzame zokuphelisa oku kwaye kwakhutshwa amagosa alikhulu nathe anikwa uqeqesho olumandla ukujongana nemizila kaloliwe. Othethela inkampani yakwa Metrirail u Riana Scott uthi phakathi kwezinto ababanjelwe zona abarhanelwa kukufunyanwa bephethe izixhobo ezingekho mthethweni.
Bavela enkundleni abarhanelwa abaphange evenkileni eMilnerton
Inkonzo yesipolisa kwiphondo lentshona koloni ivakalise ukuba balindeleke ukuba bavele phambi kwenkundla kamantyi yaseKapa namhlanje abarhanelwa abathandathu kwizityholo zokuphanga kuxhotyiwe. Iingxelo zihambise ngelithi esisithandathu sibanjwe kanye emveni kwesiganeko sokuphangwa kwavenkile ithile eMilnerton ngolwesihlanu weveki ephelileyo ukanti ngokutsho kwengxelo ekhutshwe ngothethela abakwanqawayiphuzwa kulammandla uAndre Troy oku kulandela emveni kokuba amalungu asebenzisana neK9 unit eye asebela ikhwelo malunga nentsimbi yethoba kusasa nalapho afike abarhanelwa sele bezibeleka izithende ukusaba kwindawo yexhwayelo ngezithuthi ezibini. Kuwo wonke loqulukubhode amapolisa athimbe imikhono yekati emine, imali kwakunye nemidiza ebiweyo kodwa sithetha nje uphando luyaqhuba.